शब्दकोश: प्रेमको खोपमा जोर परेवा
“अब सँगै उड्न हामीलाई केही सहज होला है !”, चराले पखेटा टकटक्याए झैँ सर्टमा हल्का देखिन थालेको भुवा झार्दै उसको छेउमा फुसफुसाउन मन लाग्छ । यो कुरा सुन्न ऊ ठीक यतिखेर साथमा छैन ।
एउटै छानामाथि घाम तापिरहेका जोर परेवा वल्लो छेउ र पल्लो छेउमा बसेर घुरिरहे झैँ पिरो दूरी टाँगिएको छ हामीबीच । र पनि ऊ नहुँदा पनि उसको आत्‍मीयताको कसिलो बन्धनले रक्षाकवचको काम गर्छ । म त्यही आत्मीय अनुभूतिको झोलुङ्गोमा निश्फिक्री लोलाउन थालेको छु । भन्छन्- कवि, प्रेमी र पागल यस्तै विचित्र खालका अनुभूति गर्छन् । आममानिस भन्दा अलिकता भाँचिएको कित्ता । अब गाउँमा आमासँग टेलिफोन कुराकानी गर्दा ‘आमा, म राम्रैगरी बिग्रिएँ’ भनिदिए हुनेभयो अब ।
उसले याद गरेर राखेकी छे, हाम्रो पहिलो वार्तालाप, भेटघाटको सुरुवाती बेला । ‘आज घरमा गुन्द्रुकको अचार बनेको छ’ देखि ‘किन यस्तो म जस्तो अभागी हुन्छ होला है मान्छे’ भन्नेसम्मको प्रसङ्गमा उसले सुनाउने वृत्तान्तको जुहारी कुनामा मैले कान थाप्दैआएको छु । ऊ बेलाबेला त्यही पुराना दिनबारे प्रसङ्ग सुनाउँछे, यस्तो भा’थ्यो है ! स्कूलकी जेहेन्दार र लगनशील विद्यार्थी जस्तै उसले यी सबै कुरा स्मृतिको एलबममा तास झैँ फिटेर राखेकी छे । बरू मैँ पो हुँ हुस्सु ! मेरो मनको भित्तामा कतिखेर-कतिखेर उसको प्रेमिल पेन्टिङ टाँगियो, हेक्कै छैन । मन त्यस्तै हो मग्नमस्त मात्र हुन जान्दछ, हिसाब राख्दैन केही कुराको । म झरेँ पात जस्तै उसको आनन्द वनमा । एकदम पहेँलिएर ।
“आखिर वो भी फस गया हाऽ हा ऽऽ हा ऽऽऽ "
केही दिन पहिलाको कुरा - बिहे हुन लागेको आफ्नो पुरुष मित्रको बारेमा अफिसका सहकर्मी दाइ टिप्पणी गर्दै थिए । त्यो टिप्पणी केवल ठट्टा थियो या यथार्थको गह्रुङ्गो बिटा, खै बुझिनँ । मभित्र भने त्यही फस्ने कुरा हरियो रहर भएर मौलाउँदै गएको छ । मान्छेहरू अनेकौँ जमघटहरूमा प्रेम सम्बन्ध र विवाहबारे यस्ता तीता टिप्पणी, गुनासो, चर्चा विभिन्न अनुभवी मान्छेहरूकै मुखबाट सुन्छन्, र पनि आखिर किन होमिन्छन् सम्बन्धमा ? किन आफ्नो चोटपटकविहीन मनलाई गुडाइदिन्छन् बन्धन भनिने विवाहको झीरतर्फ ? मैं पनि त किन त्यस्तै हुँदैछु ? अब यस्ता कुरा ‘घर सल्लाह’को रूपमा उसैलाई सोधे हुने भएको छ मैले :) ।
सहरमा अरूलाई कत्तिको भावनात्मक संकट पर्छ कुन्नि, म भने बेलाबेला रुखिन्छु । सधैं यस्तै लाग्दै आयो, विभिन्न अवसररूपी चारो छोप्ने दौडाहामा लाग्नेहरूको फौज हो सहर । यहाँ मन, भावना भन्ने कुरा उच्चारण गर्नु पनि वाहियात हुन सक्छ । चोइटा मन लिएर कसैसामु सहानुभूति खोज्दै पुग्दा उपहारमा झन् हजार चोइटा पाउन के बेर ! मान्छे नै मान्छेको चाङ लाग्ने सहरको कुनै चोकतिर मोटरसाइकल लड्दा त्यसैमा च्यापिएर निरुपाय लडिरहने बिचराहरूलाई थुप्रै पटक सडक किनारबाट नियालेको छु । दया गरेर पनि कसैले सहारा दिँदै उठाइदिंदैन बाइक । मेरो पाइला पनि त त्यस्तो सहयोगी कार्यमा नसर्न थालेको धेरै भयो । यस्तो निष्‍ठुरी मनले म माया गर्न खोज्छु, माया पाउने आश गर्छु यो सहरमा ! खासमा निष्कपट र कमलो हुनुपर्ने मन-मुटु भन्ने चिजलाई पनि कुनै रिपेयर सेन्टरमा लगेर पानीको फोहराबाट सफा पार्नुपर्ने स्थिति छ । कुनै फर्निचर सेन्टरमा लगेर खाक्सीले चिल्याउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो सहरमा यस्तो खिया लागेर रुखिएको मनले खोज्ने रहेछ साथी । आफैँमाथि पनि पत्यार नहुने जाली सहरमा कसैमाथि पत्यार गर्न मन लाग्ने रहेछ । उसले आफूमाथि कति पत्यार गर्ला, माखेसाङ्लो जस्तै छ सम्बन्धभित्रको सुरुङ पनि । कता जोडिँदा कता पुगिने, नहिँडेको बाटोमा पाइला मोडिने । ‘होइन होइन’ भन्दाभन्दै नाटकीय मोडको बुई चढेर आखिरमा ‘हो’ मा परिणत हुने युगल आवाज । ‘अपरिभाषित’ सम्बन्धमा खुसी खोज्दै त्यसैमा ‘परिभाषा’ खोज्ने आशामुखी हेराइले यस्तै नतिजा दिन्छ कसैकसैको जिन्दगीमा । मेरो जिन्दगी त्यस्तै एकथान गन्ती गरिपाऊँ !
लेख्‍न खोजेको कुरा सायद यति टुक्रामा अँटाएन, अँटाउँदैन पनि । माया र सहृदयी भावको कुनै आकार पनि त हुन्न अँटाउनलाई । यो कुरा उसले बुझे मेरो लागि काफी । उसले मात्र । यही हो यो सहरमा अत्यासको भुङ्ग्रोमा खङ्ग्रङिएर प्रेमिल सिंचाइ खोज्दै भौँतारिएको मनको मायालु घोषणा । यो भौँतारिनुले अब कुनै ठेगानको बिन्दु पाए झैँ लाग्दैछ । त्यो टुङ्गोको बिन्दु ऊ नै हो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, January 29, 2011